Kukhulekelwe abafundi eSobantu kuqala unyaka | News24
Kukhulekelwe abafundi eSobantu kuqala unyaka
ABAFUNDI bezikole zaseSobantu babuthelane ehholo lomphakathi iMfenendala ngoLwesihlanu olwedlule lapho kade kubanjwe khona inkonzo yokuvula unyaka.
Lenkonzo ebihlelwe i-ANCYL ngaphansi kuka -wadi 23 ibihanjelwe abafundi baseKhwezi, Russel, ne Sobantu High kanye nezikhulu eziqhamuka emnyangweni eyahlukene nabefundisi.
Ngokusho kwekhansela lendawo uSandile Dlamini njengekomidi ngokubambisana nesigaba sentsha babone kukuhle ukuthi abafundi bathole umkhuleko ukuze bagqugquzeleke ukuqhubeka nemfundo.
“Kunezingqinamba eziningi ezibhekana nabafundi esibone kukuhle ukuthi sizikhulekele ngaphambi kokuthi kuqale unyaka njengenkinga yezidakamizwa edlangile kulendawo.
Sifuna abafundi bazi ukuthi njengoba ngoDisemba kade bethi ‘Akulaleki’ lawomagama sekufanele ashintshe kodwa bathi ‘Akulaleki imfundo ungenayo’. Imfundo iyona ekulekelelayo ukuze ukwazi ukuphila ngakho kubalulekile ukuthi abafundi baqale bahlelele ikusasa labo besasemazingeni aphansi emfundo.”
UDlamini uthe bona njengekomidi lewadi bazokwenza isiqiniseko sokuthi akukho abafundi abashoda ngako.
“Ihhovisi lekhansela livulekile, abafundi bangabika izinkinga ababhekene nazo ukuze sibalekelele ekutheni bathole imiphumela emihle ekupheleni konyaka.” Obethula inkulumo yosuku kulomcimbi uSiyabonga Nene onguMgcinimafa we-ANCYL esifundazweni ukuthaze abafundi ukuthi babambelele emfundweni yabo.
“Uma unemfundo uyakwazi ukushintsha isimo sasekhaya ofunda kulo ushintshe nendlela abazali bakho ababukeka ngayo emphakathini. Uma abazali bakho benza umsebenzi wokucosha udoti wena ngemfundo yakho ungakwazi ukubafaka endlini kanokusho futhi ubenze baziqhenye ngawe.”
UNene unxuse ukuthi zonke izinhlaka zomphakathi zikuthathele phezulu ukufunda.
“Ngisho amabandla kufanele azibophezele ekufundiseni izingane ngoba iningi imali engenayo kuwona masonto onke ivele kumalunga omphakathi. Kufanele amabandla asungule eyawo imifundaze ezoklomelisa abafundi abenze kahle kungagcini nje ngokuthi bakhulekelwe uma bephase ibanga leshumi. Imfundo kufanele ibaluleke kuwo wonke amazinga omphakathi.”
Ephetha inkulumo yakhe uNene uthe abafundi kufanele bazi ukuthi imifundaze ekhishwa uhulumeni eyabantu abenza kahle kuphela ngakho kufanele basebenze ngokuzikhandla.